MyFish - နာမည်ကျော်လူသိများတဲ့ ငါးဖမ်းဂိမ်းကို အခြေခံထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးငါးဖမ်းမိုဘိုင်းဂိမ်း
Hawk Hero - သိမ်းငှက်သူရဲကောင်း - သိုင်းလောကထဲမှာ တကယ့်ကိုဈာန်ဝင်မျောပါပြီး ရင်ဖိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာ RPG ဂိမ်းအတွေ့အကြုံတွေကိုပေးသွားမယ့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံးသိုင်းဂိမ်း
Lucky Wingabar - လပ်ကီးဝင်္ကပါ - ရှမ်းကိုးမီး၊ ပိုကာရှိူး၊ လပ်ကီးလှည့်ဘီး၊ ဂျက်ပေါက်စသော ကဒ်ဂိမ်းတွေကစားနိုင်ပါတယ်။
MyHero Bo Lattae - My Hero Bo Lattae - အကျော်ကြားဆုံးသူရဲကောင်းပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ပထမဆုံးအပစ်အခတ်ဂိမ်း (RPG) တွေထဲက တစ်ခု။ ထူးခြားတဲ့နောက်ဆုံးအကွက်တွေနဲ့ ခမ်းနားတဲ့သက်ဝင်လှုပ်ရှားပုံရိပ်တွေ ထိပ်တန်းပါဝင်မှုနဲ့အတူ စိတ်ကူးယဉ်စွန့်စားကမ္ဘာ၊ တွဲဖက်စွမ်းရည်တွေနဲ့ critical ပေါက်ကွဲမှုတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ဂိမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Land of Magic - ဂိမ်းက မြန်မာပြည်မှာ ပထမဆုံး MMORPG (လူအများပါဝင်ပြီး အွန်လိုင်း နေရာအလိုက်ဆော့ဂိမ်း) တွေထဲက တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။Land of Magic က အွန်လိုင်းဖွင့်ဆော့ရတဲ့ မိုဘိုင်းဂိမ်းတစ်ခု ဖြစ်ရုံတင်မကပါဘူး။ မှော်ဝင်တိုင်းပြည်လေးမှာ လူသားမျိုးနွယ်တွေနဲ့ဝိညာဉ်တစ္ဆေတွေ လျှို့ဝှက်စွာနဲ့ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခဲ့ပုံတွေကိုလည်း ဖော်ဆောင်ထားပါတယ်။
Ooredoo ဖြင့် ငွေဖြည့်သွင်းမှု လမ်းညွှန်
အောက်ဖော်ပြပါ အဆင့်များမှာ အသုံးပြု၍ နမူနာဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော Game များမှာလဲအလားသဏ္ဌန်တူဖြစ်ပါတယ်။
Step 1. ငွေဖြည့်သွင်း ရန်သို့ အတွက် Game ထဲမှ ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းမှုထဲသို့သွားပါ။
Step 2. သင့်ဖြည့်သွင်းမည့် ပက်ကေ့ခ်ျ (ပမာဏ) ကိုရွေးချယ်ပါ ။
Step 3. ငွေဖြည့်သွင်းမှုအမျိုးအစားမှာ Phone bill ကိုရွေးချယ်ပါ ။
Step 4. Ooredoo Phone Bill ကိုရွေးပါ ။
Step 5. သင် ငွေဖြည့်မှု ပြုလုပ်မည့် Ooredoo နံပါတ်ကိုထည့်သွင်းပါ ။ ( ပုံစံ= “09xxxxxxxx” )
Step 6. SMS မှတဆင့် ဖြည့်သွင်း ရမည့် OTP နံပါကို ရရှိပါမည် ။ OTP ကိုထည့်သွင်းပြီး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ ။
Step7: ငွေဖြည့်သွင်း ခြင်း အတည် ပြုရန် အတွက် ထပ်မံ တောင်းဆိုပါမည် ။ ”လက်ခံမည်”ကို နှိပ် ပြီးရွှေ့ဆက်ပါ ။
**မှတ်ချက် : MyGame မှ Game များတွင် ငွေဖြည့်သွင်းမှု ပြုလုပ်ရန်အတွက် သင့် Account ကို အတည်ပြုပြီးမှ သာလျှင် ပြုလုပ်နိုင်မည် ။
In-app-purchase ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
In-app-purchase ဆိုသည်မှာ Game ကစားနေချိန်အတွင်းအနိုင်ရရန် (သို့) စွမ်းအားမြှင့်တင်ရန် လို အပ်သော ငွေ/ရွှေ/ရတနာ များကို Game အတွင်း မှ ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကျသင့်မည့် ကုန်ကျစရိတ်ကို Ooredoo Phone Bill မှပေးချေခြင်းဖြင့်ဝယ်ယူ နိုင်ပါသည်။
ဘယ် Game များတွင်ပေးချေနိုင်ပါသလဲ။
MySQUAR ဟာ ပြည်တွင်း မှာ ကစားနိုင်မည့် Game များကိုမြန်မာဘာသာဖြင့်ထုတ်လုပ်သော ကုပ္မဏီဖြစ်ပါတယ်။ MySQUAR မှထုတ်လုပ်တဲ့ အောက်ပါ Game များတွင် ဖြင့် ငွေ/ရွှေ/ရတနာ များကိုဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
MyCombo - သူရဲကောင်း ၅၀။စွမ်းရည် ပေါင်း၃၀၀ကျော်ပါဝင်တဲ့ သင့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်စေမဲ့ တိုက်ခိုက်မှု Role Playing Game (RPG).
Land of Magic - ဂိမ်းက မြန်မာပြည်မှာ ပထမဆုံး MMORPG (လူအများပါဝင်ပြီး အွန်လိုင်း နေရာအလိုက်ဆော့ဂိမ်း) တွေထဲက တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
Land of Magic က အွန်လိုင်းဖွင့်ဆော့ရတဲ့ မိုဘိုင်းဂိမ်းတစ်ခု ဖြစ်ရုံတင်မကပါဘူး။ မှော်ဝင်တိုင်းပြည်လေးမှာ လူသားမျိုးနွယ်တွေနဲ့ဝိညာဉ်တစ္ဆေတွေ လျှို့ဝှက်စွာနဲ့ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခဲ့ပုံတွေကိုလည်း ဖော်ဆောင်ထားပါတယ်။
ဖုန်းအတွင်းဘယ်လို Install လုပ်နိုင်ပါသလဲ။
http://mygamemm.com သို့ဝင်ရောက်ပြီး တခုခြင်း၏အသေးစိတ် နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဒေါင်းလုပ် လင့်ခ် များကိုကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။
ပေးချေ ရမည့်ငွေကြေးပမာဏကို အတွင်းတွင်အသီးသီးဖော်ပြထားပါသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်
ရတနာ ၄၀ အတွက် ၅၂၅ ကျပ်
ရတနာ ၈၀ အတွက် ၁၀၅၀ ကျပ်
ရတနာ ၁၆၀ အတွက် ၂၁၀၀ ကျပ်
ရတနာ ၂၄၀ အတွက် ၃၁၅၀ ကျပ်
ရတနာ ၃၂၀ အတွက် ၄၂၀၀ ကျပ်
ရတနာ ၄၀၀ အတွက် ၅၂၅၀ ကျပ်
ရတနာ ၄၈၀ အတွက် ၆၃၀၀ ကျပ်
ရတနာ ၅၆၀ အတွက် ၇၃၅၀ ကျပ်
ရတနာ ၆၄၀ အတွက် ၈၄၀၀ ကျပ်
ရတနာ ၈၀၀ အတွက် ၁၀၅၀၀ ကျပ်
Game ကစားခြင်း အတွက် အသုံးပြုခကျသင့်ပါမည်လား။
Online Game များ ကစားခြင်း တွက် ရယူထားသောဒေတာအစီအစဉ်အတိုင်း အသုံးပြုခကျသင့်ပါမည်။
ငွေလက်ကျန်မရှိပါ က ဝယ်ယူ မှု မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ငွေဖြည့်ပြီး နောက်ဆက်လက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
မိုဘိုင်းဖုန်း ဖြင့် အင်တာနက် ချိတ်စတ်နိုင်မှုရှိမရှိ ကိုစစ်ဆေးပါ။ နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်ပါသည်။
နောက်တစ်ခေါက် ပြန်လည်ကြိုးစားကြည့်ပါ။ အဆင်မပြေသေးပါက MySQUAR ဝန်ဆောင်မှုဌာန ၀၉၇ ၉၉၂၃ ၅၇၈၉ သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ယခင်က Game အတွင်း ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ယခု Game မှ ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းရန်ပြောနေပါသည်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
၇ရက်ပြည့်တိုင်း မိမိ၏ ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြန်ထည့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းများတွင် ကုန်သွယ်ခွန် ၅% ပါဝင်ပြီးဖြစ်သည်
ဝက်ဘ်ဆိုက်ဝင်ကြည့်ရာတွင်၊ ဂိမ်းကိုဒေါင်းလုပ်ချရာတွင် ဒေတာအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ရှိမည်
ဖော်ပြပါဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ယခုဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိသုံးစွဲသူထံ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိပဲ အချိန်မရွေး ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်၊ ရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်သည် အူရီဒူးမြန်မာလက်ဝယ်တွင်ရှိသည်